Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Files Audio tayo leh
> Resource > Music > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Files Audio tayo leh
Ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah qalabka dijitaalka ah sida MP3 ciyaaryahanka, taleefanka gacanta, iPod, iwm u ogolaadaan isticmaalayaasha inay masixi content hadda iyo dar cusub. Waa dhab haboon oo dabacsan si ay u yaqaaniin content ee milkiilayaasha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale arrin caadi ah in file maqal ah oo muhiim ah loo bartey saaro ama la tirtiray sababo kala duwan sida hoos ku qoran:
• By qalad tirtirto ee files music cajiib ah sida MP3, WMA, iwm
• Delete maktabadda music by dadka kale iyada oo loo marayo hilmaamay
• drive adag si lama filaan ah u burburay markii ay kaga dayanayaan music ka iPod in PC
• Music gaartay iyadoo la isticmaalayo howlan Lugood ama qalabka kale ee warbaahinta
Waxaa wax laga diiqadoodo in ay lumiyaan kuwa files audio muhiim ah, sida loo duubayaa files shakhsi, qalabka audio muhiim u ah shaqada, music qiimo iibsaday ka Lugood iyo wixii la mid ah. Hadda waxaa jira yimaado xalka. Waxaad iyaga oo dhan ka heli kartaa dib dhab ahaantii marka aad iyaga ka lumay ay sabab u tahay sababaha kor ku xusan. Waxa aad u baahan yahay nooc ka mid ah soo kabashada audio , oo waxaad isku dayi kartaa Wondershare Photo Recovery , kaas oo awood kuu inuu ka soo kabsado files audio lumay, video iyo sawiro ka storage devices kasta oo camera digital.
Ku rakib Photo Recovery ah iyo waxa maamula on your computer. Haddii aad rabto in aad soo kabsado file maqal ah oo ku saabsan wax kasta oo qalabka dibadda, fadlan ku xidhmi doontaa PC. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad ka bogsato files audio lumay ka camera digital, kaadhka xusuusta, USB drive, dibadda iyo gudaha computer drives adag. Markaas riix "Start" si ay u bilaabaan shaqada dib u soo kabashada.
Tallaabada 2. Dooro jidka u soo kabashada
In guddi Jidka doorashada, oo dhan drives ku ogaan computer ayaa lagu soo bandhigay. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay xaqiijiso mid ka aad rabto in aad soo kabsado files audio ka, ka dibna waxay doortaan, oo guji "Scan".
Waxa kale oo aad dooran kartaa inuu ka soo kabsado qaab gaar ah oo ay dejinta nooca faylka sawirka ka hor. Dooro "Audio" ka mid ah liiska hoos-hoos iyo hubi qaababkan jeclaystay soo kabashada. Ka dibna ku dhacay "Scan".
Tallaabada 3. Ladnaansho files audio
Ka dib markii iskaanka ah, ee files audio ka helay daafaca ku qoran yihiin natiijada scan. Calaamadee "Audio" folder bidixdiisa oo ku dhacay "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, meel kasta oo aad rabto, marka laga reebo meesha aad iyaga ka hor lumiyay tixgelin ammaan ah.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta soo kabsaday, waxaad dooran kartaa in kaliya loo hubiyo qaab aad jeclaystay soo kabashada, sida M4A, MP3, regelingen, iwm dheeraad ah iyo, taas Photo Recovery kuu ogolaanaya in aad ka bogsato videos lumay iyo sawiro iyo sidoo. Waxaad soo kaban karto, ku jira oo dhan disk oo dhan hal mar by doorashada "Muuji All" oo ah nooca file ee "Xulashada Filter" ah.
Sida loo badbaadi Khasaaray Videos la Video Recovery Software
Download High School Musical Iyadoo Torrent ama aan Torrent
Top 30 gooldhalinta Single
Top 10 goobood u Free Tracks Music download
50 Playlists 8tracks Great u Hawlaha kala duwan ee lagu talinayo